मुक्षेत्र गुरुङलाई खुल्ला पत्र | We Nepali
नेपालको समय: २०:१२ | UK Time: 14:27
मुक्षेत्र गुरुङलाई खुल्ला पत्र
२०७२ फागुन ७ गते २१:३९
आत्मीय दाजु नमस्कार,
आरामै हुनुहुन्छ होला । ढिलै भएपनि एन.आर.एन.ए. यूकेको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा दाजुलाई वधाई टक्र्याउंछु । दाजु हजुर कम बोल्ने, मिजासिलो, काम गरेर देखाउन सक्ने मान्छे भनेर चिनिनु हुन्छ । हामीलाई खुसी लागेको छ ।
दाजु हाम्रो हरेक तप्का राजनीति र जातीवादले गांजेको छ । हरेक निर्णयहरुमा राजनीतिले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ जहां हामी कोही अछुतो रहन सम्भव छैन् र रहेन पनि ।
दाजु पदीय मर्यादाले होला दाजुलाई जबरजस्ती भाषण गराइन्छ । पक्कै दर्शक दीर्घाको मनोभावना बुझेर होला दाजु कम बोल्नुहुन्छ । थोरै समय लिनुहुन्छ । त्यो पट्यार लाग्दो भाषणहरु भन्दा कम र चाहिने कुरा राख्दा दाजुलाई झनै उच्च देख्छु म ।
दाजु लोभी पापीहरु धेरै छन् । आफैं बदनामी छन् । बदनाम गराउन लागिपर्छन् । दाजु तिनैको हालीमुहाली छ । विस्तारै बुझ्दै हुनुहुन्छ होला ।
दाजु म बेलायत छिरेको पनि ९ वर्ष हुन लाग्यो तर, मलाई सदस्य हुन एनआरएनएले कत्ति लोभ्याउन सकेन । बेलायतमा एनआरएनएको छवी बिंग्रदो छ । चुनौतीको पहाड छन् । त्यसैले त्यो बिग्रिएको घर छिर्नु मन लागेन । म जस्तै हजारौंलाई एनआरएनएले छुन सकेन । हामी युवाको हुनै सकेन । खाली एनआरएनए नेता आउंदा कुंदाकुद गर्ने फुस्रे रोगी घोडा जस्तो भएको छ । दाजु मर्यादाक्रम पनि छाड्न सकिन्न जानैपर्छ । लोकले त्यो बुझ्दैन । दाजु हामी सदस्य नरहेको मान्छेहरुलाई आकर्षक प्याकेज लिएर आउनुस् हामीलाई लोभ्याऊन सक्नुस् । हामीले पनि गर्व गर्न सकियोस् । तमाम युवाहरुले गर्व गर्न सकियोस् ।
हजुरलाई ४ वर्ष अगाडि देखिको एनआरएनएको अवस्था के थियो म त्यतातिर जान चाहन्न, त्यो बितिसक्यो ।
दाजु हजुरलाई सकस् छ । नेपाल हाउसको चटारो छ । सबैलाई समेट्न जम्बो सल्लाहकारको पद खडा गरिदिनु भएको छ । समाजका केही पूर्वाग्रहीहरुलाई आपत्ति भए पनि मेरो आपत्ति छैन् लाग्नुस्, गर्नुस्, सके हात नसके साथ सबैले दिन्छन् ।
दाजु नेपाली समाज मिश्रित छ । जनजाति, बाहुन, क्षेत्री, खस, सबै छन् । हजुर सबैको बनिदिनुस् । लोभी पापी फंसाउने धेरै छन् बच्दिनुस् । त्यो नेपाल हाउस् सबै समुदायको होस् अझै गर्व गर्न लायक होस् । आंखाको नानी नानी, डिल डिल मस्तिष्क मुटु, धड्कनमै बस्न सकोस्, अगिम शुभकामना छ ।
दाजु मैले अलिक अगाडि एउटा लेखमा दूतावासप्रति असन्तुष्टि पोखेको थिएं । दूतावासको नाडी छाम्दा सास मात्रै बांकी छ । मैले आसा मारिसकें । राजनैतिक भागबन्डा र केही दानवीर तथा थोत्रे एनआरएनहरुको मात्रै भयो दूतावास । मैले गर्व गरेर छाती फुलाउने ठाउं देखिन ।
मेरो प्रस्ताव नेपालमा लगानी भित्र्याउने थियो । खस्केको पर्यटन लाई उकास्ने थियो । कि अब सधैं मेरो पुस्ता राजनीतिको चुंगुलमा फसी रहनु पर्ने हो ? दाजु तमासा हेरेर बस्नु पनि अपराध हुन्छ । चाकडीको हद छ । दौडधुप छ, भ्याई नभ्याई छ ।
दाजु त्यो दूतावासले सकेन र सक्दैन पनि । दूतावास सिमित व्यक्तिहरुको पेवा भइसकेको छ । राजनीतिक दलहरु आउंदा भाषण छांट्ने ठाउं हो । नेता आउंदा एयरपोर्ट कुद्ने समूह र जातीवादीको पैरवी गर्ने ठाउं हो । म जस्तो युवाले दूतावासको आस मारी सकें । त्यसैले अब एउटा विशेषज्ञहरुको टिम बनाउनुस् जसले नेपालको ब्यूरोक्रेसीलाई एड्रेस गर्न सकोस् । जसले नेपालको कानुन नियमावली कर्पोरेट समक्ष खुलेर अथ्र्याउन सकोस् । कर्पोरेट एनालिष्ट, बैंकिङ र प्रविधिको ज्ञान भएको मान्छेहरु समेटेर वीज्ञ टोली खडा गर्नुस्, वहस चलाउनुस् र नेपालमा लगानी लैजानुस् ।
पर्यटन, हाइड्रो, कल कारखानामा प्रशस्तै सम्भावना छन् ।
नेपालको अलैंची, कफी, चिया प्रसिद्ध छन् । यता पनि बेच्ने चांजोपांजो मिलाउंm । सबैले जित्छ नि दाजु ।
हातेमालो गरे सकिन्छ टाढा अप्ठेरो छैन् । मेरो बुबाको पालामा अब देश बन्छ भनिस्यो । राजाले छाडे नेता आए । युगनै परिवर्तन गरिन्छ भन्दै ढोल पिट्दै माओवादी आए । राजालाई निकाले सत्ता लिए । १० वर्ष भयां झन् बेहाल भो । अब आउने सन्ततिले सम्वृद्ध नेपाल हेर्न पाउनु पर्छ, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी विदेश देखेका, विकास देखेका मान्छेहरुमा झनै बढी हुन जरुरी छ । युवाहरु तमाम छन् । बेलायतमा दोस्रो पुस्ता तयार हुंदैछ । एक सय एक छन् समेट्नुस्, परिचालन गर्नुस्, ती युवाहरुको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुस् । उनीहरु यहीं पढे होलान्, हुर्के होलान् । उनीहरुको रगतमा नेपाल नै बग्छ त्यो रोकेर रोकिन्न । माया छ नेपालप्रति, दया छ ।
दाजुको पाइलाहरु विचलित नहुन् । निरन्तर प्रगतिपथमा लागी रहुन्, शुभकामना छ ।
पछाडी हजुरसंग आसा राखेका म जस्ता तमाम युवा छन् । आशा बोकेका मुनाहरु छन् । सिक्ने सिकाउने प्रेरणा मिलोस् ।